Imigomo yokusetshenziswa - Richardmille.to
Kuvuselelwe kokugcina: Julayi 08, 2020
Uyacelwa ukuthi ufunde le mibandela nemibandela ngaphambi kokusebenzisa insizakalo yethu.
Amagama lapho incwadi yokuqala yenziwe yaba nezincazelo ezichazwe ngaphansi kwale mibandela elandelayo.
Izincazelo ezilandelayo zizoba nencazelo efanayo kungakhathalekile ukuthi zivela ngobunye noma ngobuningi.
Ngenhloso yale Migomo nemibandela:
lobulungu kusho ibhizinisi elilawulayo, elilawulwa noma elilawulwa ngokufanayo neqembu, lapho “ukulawula” kusho ubunikazi bamasheya angama-50% noma ngaphezulu, inzalo yezimali ezilinganayo noma ezinye izibambiso ezinelungelo lokuvotela ukukhethwa kwabaqondisi noma esinye isiphathimandla esilawulayo.
Company (okubizwa ngokuthi “iNkampani”, “Thina”, “Thina” noma “Okwethu” kulesi Sivumelwano) kubhekiselwa kumgungundlovu kaRichard.
Izwe kubhekiswa ku: Washington, United States
Idivayisi kusho noma iyiphi idivayisi engafinyelela Kwinsizakalo njengekhompyutha, iselula noma ithebhulethi yedijithali.
Izikhungo kubhekiswa kuwebhusayithi.
Imibandela (ephinde yaziwa ngokuthi “Imigomo”) isho le Migomo Nemibandela eyenza isivumelwano sonke phakathi Kwakho neNkampani maqondana nokusetshenziswa kwensizakalo. Lesi sivumelwano semigomo nemibandela senziwe ngosizo loMenzi Wemigomo Nemibandela.
Inkonzo Yezindaba Zenhlangano Yesithathu kusho noma yiziphi izinsizakalo noma okuqukethwe (kufaka phakathi idatha, imininingwane, imikhiqizo noma izinsizakalo) ezinikezwe umuntu wesithathu okungakhonjiswa, kufakwe noma kwenziwe kutholakale yisevisi.
Iwebhusayithi kubhekisa ku-richard mille, kufinyeleleka kusuka ku- https://www.richardmille.to/
Wena kusho umuntu othola noma osebenzisa i-Service, noma inkampani, noma enye inhlangano yezomthetho egameni lakhe lowo muntu ongena noma osebenzisa isevisi, njengoba kusebenza.
Le yimibandela nemibandela elawula ukusetshenziswa kwalesi sevisi kanye nesivumelwano esisebenza phakathi kwakho nenkampani. Le migomo nemibandela ibeka amalungelo nezibopho zabo bonke abasebenzisi ngokusetshenziswa kwensizakalo.
Ukufinyelela kwakho ekusebenzeni nensizakalo kunikezwe ekwamukelweni kwakho nasekuvumelaneni nalemigomo nemibandela. Le migomo nemibandela isebenza kubo bonke abavakashi, abasebenzisi nabanye abafinyelela noma abasebenzisa Insiza.
Ngokufinyelela noma ngokusebenzisa Insiza Uyavuma ukuboshwa yile migomo nemibandela. Uma ungavumelani nanoma iyiphi ingxenye yale Migomo nemibandela ngeke uvele Ungafinyeleleki Kwinsizakalo.
Umele ukuthi ungaphezulu kweminyaka engu-18. Inkampani ayabavumeli labo abangaphansi kweminyaka engu-18 ukuthi basebenzise insiza.
Ukufinyelela kwakho ekusebenziseni kwakho Insiza futhi kunqunyelwe ekwamukeleni Kwakho nasekuvumelaneni nenqubomgomo Yobumfihlo yeNkampani. Inqubomgomo yethu Yobumfihlo ichaza izinqubomgomo nezinqubo zethu ekuqoqweni, ekusebenziseni nasekuvezeni imininingwane yakho lapho usebenzisa i-application noma iwebhusayithi futhi ikutshela ngamalungelo akho obumfihlo nokuthi umthetho ukuvikela kanjani. Uyacelwa ukuthi ufunde inqubomgomo yethu Yobumfihlo ngokucophelela ngaphambi kokusebenzisa Inkonzo yethu.
Insizakalo yethu ingaqukatha izixhumanisi ezingosini zangaphandle noma izinsiza ezingezona ezezinkampani noma ezingalawulwa yiNkampani.
Inkampani ayinamandla okuphatha, futhi ayizibophezeleli, okuqukethwe, izinqubomgomo zobumfihlo, noma ukwenza kwanoma yiluphi iwebhusayithi amawebhusayithi noma izinsiza. Ubuye uvume futhi uvume ukuthi iNkampani ngeke ibe nesibopho noma umthwalo, ngokuqondile noma ngokungaqondile, nganoma yimuphi umonakalo noma ukulahleka okubangelwe noma okusolwa ukuthi kubangelwa noma kuhlobene nokusebenzisa noma ukuthembela kunoma yikuphi okuqukethwe, izimpahla noma izinsizakalo ezitholakala ku- noma nganoma yiluphi lawo mawebhusayithi noma izinsiza.
Sikucebisa ngokuqinile ukuthi ufunde imigomo nemibandela nezinqubomgomo zobumfihlo yanoma yiliphi iwebhusayithi ye-webhusayithi noma izinkonzo ozivakashelayo.
Singase sinqamule noma simise ukufinyelela kwakho ngokushesha, ngaphandle kwesaziso sangaphambili noma isikweletu, nganoma yisiphi isizathu, kubandakanya ngaphandle komkhawulo uma wephula lemigomo nemibandela.
Lapho unqanyulwa, ilungelo lakho lokusebenzisa lesevisi lizophela ngokushesha.
Ngaphandle komonakalo ongaba nawo, sonke isikweletu seNkampani nanoma ibaphi abahlinzeki bayo ngaphansi kwanoma yikuphi ukuhlinzekwa kwale Migomo kanye nekhambi Lakho elikhethekile lakho konke lokhu okushiwo ngenhla kuzokhawulelwa enanini olikhokhelwe Nguwe ngesevisi noma nge-100 USD uma ungathenganga lutho ngesevisi.
Ngokwezinga eliphakeme elivunyelwe ngumthetho osebenzayo, kunoma yisiphi isikhathi lapho Inkampani noma abahlinzeki bayo bezokhokhiswa noma ikuphi ukulimala okukhethekile, okuphathelene, noma okungaqondile, noma okulimazayo (okubandakanya, kepha kungagcini lapho, ukulimala kokulahleka kwenzuzo, ukulahleka kwedatha noma eminye imininingwane, yokuphazamiseka kwebhizinisi, ukulimala komuntu, ukulahleka kobumfihlo okuvela noma nganoma iyiphi indlela ehlobene nokusebenzisa noma ukungakwazi ukusebenzisa i-Service, isoftware yomuntu wesithathu kanye / noma i-hardware evela eceleni esetshenziswe nensizakalo, noma ngaphandle kwalokho maqondana nanoma yikuphi ukuhlinzekelwa kwale Migomo), noma ngabe Inkampani noma omunye umphakeli selulekwe ngokwenzekile kulowo monakalo futhi noma ngabe ikhambi lihluleka yinjongo yalo ebalulekile.
Ezinye izifundazwe azikuvumeli ukukhishwa kwewaranti noma umkhawulo wesikweletu esishiwoyo noma ukulimala okulandelayo, okusho ukuthi eminye yemikhawulo engenhla ingase ingasebenzi. Kulezi zifundazwe, isikweletu seqembu ngalinye sizokhawulelwa ngezinga elikhulu kakhulu elivunyelwe ngumthetho.
“NJENGOBA KUNJALO” nethi “NJENGOBA KUTHOLAKALA” Umshwana wokuzikhipha emthwalweni
Isevisi unikezwa yona “NJENGOBA INJALO” futhi “NJENGOBA IKHONA” nangawo wonke amaphutha nezinkinga ngaphandle kwewaranti yanoma iluphi uhlobo. Ngokwezinga eligunyaziwe ngaphansi komthetho osebenzayo, iNkampani, egameni layo nangenxa yababambisene nabo kanye nabanikezeli bayo bamalayisense kanye nabahlinzeki bezinsizakalo, izichitha ngokusobala zonke iziqinisekiso, noma ngabe ziveziwe, zishiwo, zisemthethweni noma ngenye indlela, maqondana ne Isevisi, kufaka phakathi wonke amawaranti ashiwo wokuthengiseka, ukuqina ngenhloso ethile, isihloko nokungaphuli umthetho, kanye namawaranti angavela ngokusebenza, inkambo yokusebenza, ukusetshenziswa noma ukuhweba. Ngaphandle komkhawulo kulokhu okungenhla, iNkampani ayihlinzeki ngewaranti noma ngesibopho, futhi ayenzi nhlobo ukumelwa kwanoma yiluphi uhlobo ukuthi Isevisi izofeza izidingo Zakho, ifinyelele kunoma yimiphi imiphumela ehlosiwe, isebenzisane noma isebenze nanoma iyiphi enye isoftware, izinhlelo zokusebenza, izinhlelo noma izinsiza, ezisebenza ngaphandle kokuphazamiseka, uhlangabezane nanoma yimaphi amazinga wokusebenza noma wokuthembeka noma ungabi namaphutha noma ukuthi noma yimaphi amaphutha noma ukukhubazeka kungalungiswa noma kuzolungiswa.
Ngaphandle kokunciphisa lokhu okungenhla, iNkampani noma yimuphi umhlinzeki wenkampani akenzi noma isiphi isethulo noma iwaranti yanoma iluphi uhlobo, azwakalise noma asikisele: (i) maqondana nokusebenza noma ukutholakala koPhiko, noma imininingwane, okuqukethwe, nezinto zokwakha noma imikhiqizo kufakwe kuwo; (ii) ukuthi uMnyango ngeke uphazanyiswe noma ube namaphutha; (iii) maqondana nokunemba, ukwethembeka, noma uhlobo lwemali kwanoma yiluphi ulwazi noma okuqukethwe okuhlinzekwa ngoPhiko; noma (iv) ukuthi i-Service, amaseva ayo, okuqukethwe, noma ama-imeyili athunyelwe evela noma enzelwa iNkampani awanawo amagciwane, imibhalo, amahhashi e-trojan, izibungu, i-malware, amabhomu wesikhathi noma ezinye izinto eziyingozi.
Eminye imithetho ayikuvumeli ukufakwa kwezinye izinhlobo zamaranti noma imikhawulo kumalungelo asemthethweni asemthethweni omthengi, ngakho-ke okunye noma konke lokhu okukhishwe ngenhla nemikhawulo kungenzeka kungasebenzi kuwe. Kepha esimweni esinjalo ukungafakwa kanye nemikhawulo ebekwe kulesi sigaba izosetshenziswa ngezinga elikhulu kakhulu elingasetshenziswa ngaphansi komthetho osebenzayo.
Imithetho Yezwe, ngaphandle kwezingxabano zayo zemithetho yomthetho, izobusa le migomo nokusebenzisa Kwakho Insiza. Ukusetshenziswa kwakho kweSicelo kungahle kube ngaphansi kweminye imithetho yasekhaya, yesifundazwe, kazwelonke, noma yamazwe omhlaba.
Uma kukhona okukukhathazayo noma okuphikisayo mayelana nensizakalo, uyavuma kuqala ukuzama ukuxazulula impikiswano ngokwethukela ngokuxhumana nenkampani.
Kwabasebenzisi be-European Union (i-EU)
Uma ungumthengi we-European Union, uzohlomula kunoma yikuphi ukunikezwa okuphoqelekile komthetho wezwe ohlala kulo.
United States Legal Ukuhambisana
Ubonisa futhi uqinisekisa ukuthi (i) Awukho ezweni elingaphansi komthetho kahulumeni wase-United States, noma okhethwe nguhulumeni wase-United States njengezwe "elisekela amaphekula", futhi (ii) Awusiwona kufakwe kuhlu kunoma yiluphi uhlu lukahulumeni wase-United States lwamaqembu avinjelwe noma avinjelwe.
Uma noma yikuphi ukuhlinzekelwa kwale Migomo kubanjwa kungabekezeleleki noma kungasebenzi, ukuhlinzekwa okunjalo kuzoshintshwa futhi kuhunyushelwe ukufeza izinhloso zokuhlinzekwa lokho ngezinga elikhulu kakhulu ngaphansi komthetho osebenzayo futhi nezinhlinzeko ezisele zizoqhubeka zisebenze ngokuphelele.
Ngaphandle kwalapho kuhlinzekwe lapha, ukwehluleka ukusebenzisa ilungelo noma ukufuna ukwenziwa kwesibopho ngaphansi kwale Migomo ngeke kulimaze ikhono leqembu lokusebenzisa lelo lungelo noma kudinge lokho kusebenza nganoma isiphi isikhathi ngemuva kwalokho futhi ngeke kube ukuyekelwa kokwephula kwanoma yikuphi ukwephulwa okulandelayo.
Le migomo nemibandela kungenzeka ihunyushwe uma sibenze batholakala kuwe ku-Service yethu. Uyavuma ukuthi umbhalo wokuqala wesiNgisi uzonqoba uma kunengxabano.
Izinguquko Kule Migomo Nemibandela
Sigcina ilungelo, ngokubona kwethu, lokushintsha noma lokushintsha le Migomo nganoma yisiphi isikhathi. Uma ukubuyekeza kuyinto ebalulekile Sizokwenza imizamo efanelekile yokunikeza okungenani isaziso sezinsuku ezingama-30 ngaphambi kwanoma yimiphi imigomo emisha eqala ukusebenza. Okudala ushintsho lwezinto ezibonakalayo kuzonqunywa ngokubona kwethu.
Ngokuqhubeka ukufinyelela noma ukusebenzisa insizakalo yethu ngemuva kokuthi lezo zibuyekezo zisebenze, uyavuma ukuboshwa yimigomo ebukeziwe. Uma ungavumelani nemigomo emisha, iphelele noma ingxenye yayo, sicela uyeke ukusebenzisa iwebhusayithi kanye nensizakalo.
Uma unemibuzo ngale mibandela nemibandela, ungaxhumana nathi:
Nge-imeyili: [i-imeyili ivikelwe]